Mmekọrịta ụlọ ọrụ - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Kwado Anyị > Mmekọrịta Mmekọrịta
Mmekọrịta ụlọ ọrụ
Companylọ ọrụ gị nwere ike ịnwe mmetụta dị ukwuu na ndụ ndị mmadụ nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi na mgbaka.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị na ndị nyere onyinye na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwado ọrụ mpaghara anyị na-arụ.
Soro anyị rụọ ọrụ dịka onye ọrụ ebere, mee ka anyị bụrụ Onyinye afọ gị ma ọ bụ nye onyinye otu ụlọ ọrụ.
Ma ị họọrọ ịgbasa ego gị na ọrụ anyị niile, ma ọ bụ na ị ga-ahọrọ ilekwasị anya na ịkwado ahụike ọgụgụ isi anyị ma ọ bụ ọrụ nhụjuanya, anyị ga-arụkọ ọrụ ọnụ yana ndị otu gị iji zụlite mmekọrịta mmekọrịta bara uru nke ga-eme ka ndụ dị ogologo ndị bi n’ógbè gị.
Abamuru nke iso anyị rụọ ọrụ
Will ga - akwado Mind mpaghara gị - yabụ ị ga - ejide n’aka na ịchọta ego na onyinye ga - aga n’ihu n’inye ndị obodo ọrụ ha.
Bulie profaịlụ ụlọ ọrụ
Isoro anyị rụọ ọrụ ga-ebuli profaịlụ ụlọ ọrụ gị.
Na-akpali ndị otu gị
Na-akpali ma na-etinye ndị ọrụ site na nchịkọta ego ndị ọrụ, ọrụ otu na ihe ịma aka.
Ọrụ afọ ofufo
Anyị na-enye ohere ọrụ afọ ofufo.
Mee ka ndị ọrụ dị mma
Mee ka ndị ọrụ ahụike ọgụgụ isi mara na ahụike ha.
Anyị na-enye ahụ ike ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ na mgbaka mmata nke ụlọ ọrụ, yana ọzụzụ ahụike enyemaka mbụ anyị ọhụụ. Chọpụta banyere ọzụzụ ụlọ ọrụ anyị.
"AC Wilgar nwere obi ụtọ na ya na BLG Mind na-arụkọ ọrụ, nzukọ dị egwu, na otu nke nyere aka n'ụzọ nkịtị ịzọpụta ndụ nwanne m nwoke."
Liam Wilgar, Onye isi, AC Wilgar
Ndị na-akwado ụlọ ọrụ na ndị mmekọ
Ndị na-akwado ụlọ ọrụ anyị ugbu a
Hụ otu anyị si arụ ọrụ na mmekọrịta anyị na ndị azụmaahịa mpaghara iji kwado ndị ọrụ ha na-arụ ọrụ ma bulie ego dị mkpa iji nyere ndị obodo aka
Hụ ndị mmekọ ụlọ ọrụ anyị.
Hụ onye ọzọ anyị na ya rụkọrọ ọrụ
Mkpakọrịta obodo na nke mba anyị na ndị na-akwado ya emeela ka ọtụtụ puku mmadụ nwee ike ịkwalite ndụ ndị mmadụ bi na mpaghara nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi na mgbaka.
Hụ ndị mmekọ anyị gara aga
Ma ọ ga-amasị gị ịmalite mmekọrịta ogologo oge, mee anyị Charity of the Year ma ọ bụ hazie mmemme otu oge na ụlọ ọrụ gị iji nweta ego maka BLG Mind, anyị ga-achọ ịnụ gị. Biko zitere ndị otu na-akpakọba ego anyị email: fundraising@blgmind.org.uk.